News Tagged "ခရီးသွားနှင့်နေရာများ" - ULLER
ချိုင့်ဝှမ်းများလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအရင်းအမြစ်များမှာ! ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်အလွန်ပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝကို၎င်း၏လှပသည့်အရာများတွင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။ သင်မသိသောကြောင့်ချိုင့်ဝှမ်းများသည်လှပသောမြေအနေအထား ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုစွန့်စားမှုအသစ်များပျော်မွေ့ရန်နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိလှပသောချိုင့်ဝှမ်းများကိုလေ့လာပြီးရှာဖွေပါ။
ကျော်ကြားသော Aran Valley သည် freerider Aymar Navarro နှင့်တူသလား။ အတိအကျ! ဤသည်ချိုင့်ဝှမ်းစျေးနှုန်းသည် Pyrenees တွင်တည်ရှိပြီးအထူးသဖြင့် Catalonia ရှိ Lleida ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်သည်။ ဤသည်အေရာန်ချိုင့်ဝှမ်း၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးဤဒေသရှိလူ ဦး ရေ၏ ၅၀% နီးပါးသည်ဤတွင်နေထိုင်ကြသည်။ ဒီဟာကတိတ်ဆိတ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးထိုတွင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင့်အားပြောပြသည်။
ကော်လိုရာဒိုနှင့် s တို့၏တောင်စောင်းများအောက်သို့တက်ပါနှင်းလျှောစီးသည့်အခါလတ်ဆတ်သောလေကိုရယူပါ ယင်း၏မယုံနိုင်လောက်အောင်သက်သာခြင်းပြိုင်ဘက်ဖြစ်ကြသည်။ ကော်လိုရာဒိုနှင်းလျှောစီးအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာလိုပါသလား။ ဒီမယုံနိုင်စရာအစက်အပြောက်ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိပါတယ် adrenaline အဆင့်ကိုအပေါ်ကိုဖတ်ပါနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ!